Semalt Inodzinga 8 Mobile Mobile SEO Myths
SEO chikamu chinokosha chekushandisa webhusaiti. Nevanhu vakawanda vachigadziravachitsvaga pafoni dzavo, webhupu yepamusoro yakawedzera zvakare. SEO yefoni yakashambadza zvakare yava nyaya inotyisa, asi zvinosuruvarisa zvizhinji zveruzivo rwaunogona kuwana pamusoro peSeO mobile runhema.
Ross Barber, nyanzvi ye Semalt Digital Services, inodzinga huwandu hukuru hwe8 SEO myths.
Nhema 1: Vanhu vanotsvaga paPC nefoni ndeyechete
Chokwadi: Vanhu vari pamba, saka havana ruzha rwekuverenga mhemberero yakazara,kwenguva refu blog posts uye tsvakurudzo dzinotsvaga pamafoni avo emafoni - сбрось мешок. Kazhinji, vari kutsvaga mhinduro dzinokurumidza. Izvi zvinowanzosiyanisaizvo vanhu vari kutsvaga pane imwe chipangizo. Nzira yakanakisisa yekutarisa izvo vanhu vari kutsvaga pamafoni avo efoni ndeye kushandisa GoogleAdWords. Iwe uchakwanisa kuwana kutarisisa kunonzwisisika muhuwandu hwemafoni emazwi makuru akaiswa nevanhu.
Nhema 2: Tsvakurudzo dzemafoni uye kuongorora kwePC zvinoratidza mhinduro imwechete
Chokwadi: Tsvaga injini dziri kushanda nesimba kuti zviite nyore kuti vanhu vawane chiiVanoda kana vachichida. Izvi zvinoreva kuti mawebsite asingashamwaridzani neshamwari haatauri zvakakwirira mumigumisiro. Iwe webhusaiti yako inogona kugadziridzwanokuda kwePC, asi inogona kutarisa zvakanyanya kushandiswa kwefoni. Nokudaro, zvikamu zvekutsvaga kwePC uye kutsvaga kwefoni zvakasiyana zvachose. Kuongorora kweGoogleinotsigira pfungwa iyi. Muchidzidzo chacho, injini huru yekutsvaga yakawana kuti pakanga pane musiyano we 86% mumigumisiro yemigumisiro yakaratidzwamaererano nekubatana kwakasiyana.
Nhema 3: Vanhu vachakurumidza kutsvaga kutsvaga mafoni avonokuti ivo vachatanga kutsvaga zvishandiso zvavo zvinopfeka
Chokwadi: Kunyange zvishandiso zvinopfeka zvakatora mushamba nemhepo, hazvirevi zvakanyanyisamukuedza kwavo kuedza kutsvaga. Nguva yekushandiswa kwekombiki inoshandiswa inongova kutanga..Siri neGoogle Goggles vaneakaedza kuita kuti hurumende iende, asi kunyange Siri anongobata chikamu che 3% mumusika, kuratidza kuti vanhu havana kubvuma zvakakwanapfungwa yekutsvaga foni yavo inotsvaga kutsvaga kutsvaga zvishandiso zvinogadzika.
Nhema 4: Mobile Mobile SEO haisi chinhu!
Chokwadi: Vanhu vazhinji vanoda kufungidzira kuti SEO mafoni ishoko rinenge irizvinowedzemuka zvakapoteredzwa. Ichokwadi kuti vanhu vazhinji havanzwisisi zvakanyanya, uye kune vashoma vasayenderedze. Kune vanhu vakawanda avofunga zvisina kunaka pamusoro pe SEO yakasununguka, asi izvozvo hazvirevi kuti pfungwa isiripo iyo inofanirwa kuregererwa zvachose.
Nhema 5: SEO iSOO, uye zvose zvakafanana
Chokwadi: Kwete, kwete, nope. SEO haisi yose yakafanana. Nharaunda SEO, mobile SEO, uye SEO yemawebhusayithi akashandurwa pane desktop uye laptop kushandisa haasi yose yakafanana. Nokukurumidza iwe unozviona izvi uye uchigadzirisa iyo nzvimbo yako, iyonzvimbo dzakanaka uye kutendeuka iwe uchagamuchira.
Nhema 6: Ingogadzirisa SEO kune foni uye voila - Mobile SEO!
Chokwadi: Tinoshuva kuti izvi zvakanga zviri nyore asi hazvisi. Iwe haugone kushandura SEO mawebhusayithi uyeshandura iyo kuti iwirirane nemafoni efoni. Nzira yekufambisa SEO yakasiyana zvachose nekugadzirisa mawebsite. Nokuti pane zvakawandaKusiyana kwezvipfeko zvemafashoni kunze uko, mafoni eSeO inofanirwa kunge ichinyatsotsanangurwa uye yakananga kupfuura webhusaiti SEO. Kudzidza pamusoro pe SEO yakashambadzazvinoda nguva uye kushivirira, asi kana zvaitwa zvakanaka, zvichakuunza zvibereko zvakanaka.
Nhema 7: Vaka nzvimbo yakagadziriswa uye wobva waifambisa pamaselula
Chokwadi: Kuvandudza webhusaiti yako kuti ishandiswe pazvinhu zvose zvingaita sezvinofadzapfungwa. Zvisinei, iwewo unofunga kufunga kuti vanhu vangave vachiri kukwanisa kuwana zvavanoda kubva panzvimbo yako. Ichokwadi, kusvika ku 60%vanhu havasi nguva dzose vanowana zvavanoda pakutsvaga kwemafoni. Izvi zvinoitika nokuti kushambadzira kwemafambisi kwakanyatsonaka uye kunoda kuvayakagadzirirwa senhengo yakasiyana uye haina kuiswa muwebsite ye SEO zano. Somuenzaniso, BMW neAmazon zvakashandisa zviuru zvemadhorakushanda zvakaoma kuoneka kuti mawebsite avo ane ushamwari hufumi uye kuti SEO yefodya yakashandiswa zvakanaka.
Nhema 8: Zvakaoma kuwana hukama kana ukashandisa SEO yefodya
Chokwadi: Hapana chingave chiripo kubva pane chokwadi kupfuura icho! Chaizvoizvo, nzvimbo yakakurumbiravafudzi vanoda kuwana hukama kubva kune mawebsite ane SEO maitiro akanaka. Saka taura hi kuti uwane hukama kubva kuGoogle, Mashable, nezvimwevane masimba nzvimbo.
Tinotarisira kuti takakubatsira kuti ushandise dzimwe dzemafaira e SEO nhepfenyuro uye chiedza chechiedzapane nyaya yechokwadi yechinhu.